Guriga - Ciyaaraha PC ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Ciyaaraha PC ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Robux lacag-la'aan ah koronto-dhaliyaha xaqiijinta ma jiro 2022 - Roblox
Dhaliyaha dheemanka Dabka ee bilaashka ah 2022 ee garena
Bogga Facebook wuxuu ka furmayaa daaqad cusubBogga Twitter wuxuu ka furmayaa daaqad cusub
Dab dhaliyaha April 8, 2022
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxo sida loo helo robux bilaash ah iyada oo aan la hubin. Sida…
Resident Evil 3 Nemesis: dib u samaynta ciyaarta ayaa la sii dayn doonaa Abriil 3, 2020!
Ciyaaraha PC April 1, 2022
Dib u samaynta Degeneyaasha Evil 3: Siidaynta Nemesis waxa la qorsheeyay kaliya Abriil 2020, haddana isku xidhka PC waa…
Cadaadiska Dhiiga: Daabacaadda Dijital ah Soodejin bilaash ah ee ugu Fiican - Nooc buuxa
Xanaaqa Dhiiga: Daabacaadda Dijital ah waa istiraatiijiyad door-ciyaar gaar ah oo ay tahay inaad la dagaallanto qabaa'ilka kale ee Viking, badbaado,…
Bani'aadamka oo dhan halaag! Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka Ah - Nooc Buuxa
Bani'aadamka oo dhan halaag! - Tani waa dib u habeyn lagu sameeyay mid ka mid ah ciyaarihii ugu caansanaa ee la soo dhaafay, mid caadi ah…
Baaqa Waajibka: Dagaalkii Casriga ahaa 2 Olole Dib Looga Badiyey
Ciyaaraha PC March 18, 2022
Wacitaanka Waajibka ee la cusboonaysiiyay: Ololaha Dagaalka Casriga ah 2 waxa uu soo bandhigi doonaa garaafyo gabi ahaanba dib loo habeeyay oo leh muuqaalo la hagaajiyay, animations, fiisigis…
12-ka ciyaar ee ugu fiican ee bilaashka ah ee lagu ciyaaro PC iyo Mac si aad ugu raaxaysato adoon bixin dime
Ciyaaraha PC, Reviews, top Games March 17, 2022
Inkasta oo xayeysiisyo joogto ah oo dukaamo online ah oo kala duwan ah, ku ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga ee PC waa qaali. Waxaan leenahay xal…
Sida lacag la'aanta loogu soo dejiyo fiidiyowyada YouTube
Movierulz Raya iyo masduulaagii u dambeeyay (2021)
Ciyaarta Apex Legends Play Battle Royale Game 2020: astaamo cusub oo laga yaabo inay ka soo muuqdaan Apex Legends
Dabka Xorta ah ee Garena - Qalabka Dhaliyaha Dheemanka iyo 7 siyaabood oo kale…
Dab dhaliyahaBy Margaret Caffrey April 8, 2022 Leave a comment
Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxo sida loo helo robux bilaash ah iyada oo aan la hubin. Si la mid ah Minecraft, Roblox waxa uu caan ku noqday ciyaar-ciyaar badan oo aasaasi ah oo siinaya khibrad gaar ah carruurta iyo dadka waaweynba. Laakiin markaa, tani maaha ciyaar caadi ah, laakiin sidoo kale suurtagal maaha horumarinta hiwaayadda inay…
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey April 1, 2022 Leave a comment
Dib-u-samaynta Xumaanta Deganeyaasha 3: Siidaynta Nemesis waxa la qorsheeyay oo keliya Abriil 2020 haddana isku-habaynta PC-ga waa horeba la heli karaa. Warka wanaagsani waa in haddii aad ku ordi karto RE2, aad sidoo kale si cad u maamuli karto. Ku dhawaaqista ayaa muddo dheer dib u dhacday, gaar ahaan ka dib markii la daabacay muuqaallo aan la daabicin, laakiin si rasmi ah mar walba waa…
Dhiiga xanaaqa: Digital Edition waa xeelad door-ciyaar u gaar ah kaas oo ay tahay inaad la dagaallanto qabaa'ilka kale ee Viking, ka badbaado, kasbato ammaanta xataa ilaahyadu aanay arkin, oo aad isku daydo inaad Valhalla gaadho ka hor intaan Ragnarok dhicin… Taariikhda: Meey 27, 2020 Nooca: Horumarinta Istaraatiijiyada: Exozet Platform: PC Interface Language: English, Multi5…
Bani'aadamka oo dhan halaag! - Kani waa dib-u-samaynta mid ka mid ah ciyaarihii ugu caansanaa ee waagii hore, filim ficil caadi ah kaas oo aad ka garab istaagto shisheeyaha sharka oo aad bilowdo inaad burburiso dadka iyo dhammaan ilbaxnimadooda jilicsan , Adventure, Adduunka Furan, Shaqsiga 28aad Horumariye: Ciyaaraha Kaynta Madow,…
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey March 18, 2022 Leave a comment
Wacitaanka Waajibka ee la cusboonaysiiyay: Ololaha Dagaalka Casriga ah 2 waxa uu soo bandhigi doonaa garaafyo gabi ahaanba dib loo habeeyay oo leh muuqaalo la hagaajiyay, animations, farsamaynta fiisigiska, iftiinka HDR, iyo wax ka badan. Wacitaanka Waajibka: Dagaalka Casriga ah ee 2 Ololaha Dib loo dhigay waxa uu ku kacayaa €24.99. Waxa ku jiri doona Kooxda Bandhiga Biyaha-hoosaad ee Classic Ghost Bundle ee Wicitaanka Waajibka: Dagaalka Casriga ah iyo Wicista…
Ciyaaraha PCReviewstop Games
Ciyaaraha PC, Reviews, top GamesBy Margaret Caffrey March 17, 2022 Leave a comment
Inkasta oo xayeysiisyo joogto ah oo dukaamo online ah oo kala duwan ah, ku ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga ee PC waa qaali. Waxaan kuu haynaa xal: u ciyaar ciyaar bilaash ah oo aad u fiican oo bilaash ah. Oo ha argagixin, kayntan magac-u-yaalka ah: sarreenka iyo buunshaha ayaannu kala soocnay. Xagaagii wuxuu soo garaacayaa albaabkayaga, iyo haddii uu kombuyuutar ku jiro…
Death Stranding Game ee sanadka ee PS4
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey March 17, 2022 Leave a comment
Hal-abuurkii ugu dambeeyay ee Hideo Kojima iyo kooxdiisu waa fikrad ay aad u adagtahay in la soo koobo. Ciyaarta dhimashadu waa yaab, inta badan si togan, sidoo kale waxay qaadataa khataro. Marka la sii ahaado shay cayaareed, waxaa ka sarreeya sheeko kasta in la is-muujiyo iyo kalinimada in la rabbeeyo. Eexda halkan waa caddahay: ka saar ciyaaryahanka...
Dab dhaliyahaBy Margaret Caffrey March 12, 2022 Leave a comment
Dabka Xorta ah ee Garena - Qalabka Dhaliyaha Dheemanka iyo 7 siyaabood oo kale oo lagu helo dheeman Shaki kuma jiro - Garena waxay soo saartay mid ka mid ah ciyaaraha mobilada ee ugu balwadda badan halkaas. Loo heli karo nidaamyada IOS iyo Android labadaba, goobta Dabka Xorta ah waxay leedahay gameplay aan caadi ahayn iyo jilayaal gaar ah oo ka dhigaya inay soo baxaan.
Danger Scavenger Free Download Game – Nuqul buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey March 8, 2022 Leave a comment
Khatarta Scavenger ee qaabka cyberpunk ayaa sheegi doonta sheekadeeda. Qorayaashu waxay kuu soo jeedinayaan inaad ku biirto koox la daweeyay, oo lagu naaneeso Scavengers. Waxaad wajihi doontaa sir adag oo aan naf lahayn. Dagaalladu waxay noqon doonaan kuwo cajiib ah oo ay ka buuxaan saameyno kala duwan oo xiiso leh. Ma ciyaari kartid keligaa laakiin sidoo kale waxaad ku martiqaadaysaa saaxiib adiga oo isticmaalaya…
Wixii ka dambeeya: Laba Nafood Ciyaar Download Free Download
Wixii ka dambeeya: Laba Nafood waa wakiil muuqda oo ka mid ah qaybaha naadir ee ciyaaraha. Kani maaha ciyaar oo kaliya, waa sci-fi thriller is dhexgal leh oo leh sheeko xiisa badan iyo jilayaal xiisa leh. Taariikhda Siideynta: Luulyo 22, 2019 Nooca: Action, Adventure, Platform Qofka 3aad: Luqadda Interface PC: English, Multi23 Sheekadu waxay ka sheekaynaysaa gabadha Jody Holmes…
Centralia: Soo laabashada gurigu waa ciyaar naxdin leh oo qofka koowaad ah kaas oo aad kaga badbaadi doonto xaaladaha ugu xun, wuxuush, siraha, iyo maah-maahooyinka, iyo sheeko aad u qani ah… Xumaantii waxay ka soo dhex gashay dunidii hoose, waxayna bilaabeen inay burburiyaan wax kasta oo jidkeeda ku socda. Inta badan, in…
Qaybta Birta 2 Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Version Full
Qeybta 2-aad ee birta waa istaraatiijiyad WWII-waqtiga-dhabta ah oo ka dhacaysa Bariga Bariga. Waxaa ka mid ah talisyada ciidanka oo dhan 1: 1 iyo dagaal xeeladeed waqtiga dhabta ah, halkaas oo kumanaan askari ay ku hoos jiri doonaan amarkaaga. U ciyaar guud ahaan ololayaasha istaraatiijiyadeed firfircoon ee 1: 1, kornayl ahaan…
Ciyaarta Bahalnimada Gawaarida Soodejinta Bilaashka ah - Nuqul buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey February 17, 2022 Leave a comment
Si xirfad leh u wad baabuurkaaga xoogga badan ee leh taayirrada waaweyn. Qaybaha: Cabbirka faylka aad u sarreeya: 105.5 Mb Soo dejiso Sharaxaada Ciyaarta Qayb ka mid ah 3 ciyaaraha tartanka ee ku saabsan baabuurta waaweyn ee daanyeerka - Racing Monster Truck Racing, Monster Truck Safari, iyo Ultra Monster Truck Games Soo dejiso Bilaashka ah - Nooca buuxa. La tartan kuwa kaa soo horjeeda iyo dariiqyada caqabada ah ee adag. Jidadka tartanka, savannanah,...
Xatooyada Grand Auto 2 Soodeji bilaash ah oo buuxa - Nooca
Xatooyada Grand Auto 2 waa sii socoshada taxanaha, dhammaan laba cabbir. Garaafyada iyo matoorka ayaa la hagaajiyay. GTA II, si aad u galiso sharci darro baahsan. Qorayaashu waxay si fiican u garanayeen waxa ay ciyaartoydu u baahan yihiin, waxay sameeyeen isbedel iyagoo tixgelinaya shuruudaha wakhtiga iyo natiijooyinkooda. Waxaa jira…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee HyperParasite – Nooc Buuxa
HyperParasite waa ciyaar ka mid ah nooca toogashada mataanaha-ulaha ah iyo roquelike, halkaas oo marin kastaa uu gaar u yahay. Xakamee 60 xaraf oo ah doorka dulin shisheeye cadaw ah. Samee jidkaaga xagga sare ee silsiladda cuntada: qabso madaxweynaha, riix batoonka cas ee weyn, oo jabiso cadawga. Soo dejinta HyperParasite. Taariikhda Siideynta: Abriil 3, 2020…
Ary iyo Sirta Xiliyada Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Version Full
Qalabka 3D ee Ary iyo Secret of Seasons waxay bixiyaan nidaam xakameyn xiiso leh xilliyada laakiin uma muuqato inay wax badan ku bixiso wixii ka baxsan. Wax badan ka akhri dib u eegista Soo-saare: eXiin, Daabacaha Kalluumeysiga Cactus: Ciyaaraha Modus Taariikhda Siideynta: Sebtember 1, 2020 Gabar yar oo la yiraahdo Ariel waa gabadha masuulka…
Aagga Grey [v 1.0 Gelitaanka Hore] (2020) PC
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey February 9, 2022 Leave a comment
Ciyaarta soo dejinta bilaashka ah ee Aagga Gray nooca buuxa - Shooter RTS oo leh walxaha RPG. Taasu waa odysseygii addoonkii mustaqbalka fog ka fallaagoobay sayidyadiisa. Waxaad sugaysaa jilayaal xusuus leh, hadallo qosol leh, iyo waxqabad badan! Nooca: Istaraatiijiyadda (RTS), Soo-saare RPG: Eastworks Daabacaha: Platform Eastworks: Nooca Daabacaadda PC: Nooca shatiga: v…
Elvenar – ciyaarta khadka tooska ah iyo istaraatiijiyad ku saleysan leexashada
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato ciyaaraha istiraatijiyadeed, markaa ciyaarta Elvenar ayaa adiga kuu ah. Marka hore, waa bilaash, ciyaartan online-ka ah waxaa lagu socodsiin karaa browser kasta. Dhexdeeda, waxaad ku lug yeelan kartaa labadaba dhismaha magaalada oo aad dhammaystirto hawlaha tartiib tartiib ah si aad u weerarto cadawga qaabka HOMM. Dhanka jilayaasha…
Ciyaarta Jaahilka Online – Version Full
Pagan Online waa ciyaar RPG isometric ah oo ka dhacda adduun khiyaali ah oo ay dhiirigelisay khuraafaadka Masiixi hore, oo ay daabacday Wargaming (oo laga yaqaan World of Tanks). Pagan Online waxaa lagu ciyaari karaa kaligiis iyo shabakada, laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso qulqulka Pagan Online kumbuyuutarkaaga sidaad rabto. TAARIIKHDA SIIDAYNTA: 2019 GENRE:…
Goosebumps Geeridii Habeenkii Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka Ah – Nooc Buuxa
Goosebumps Geeridii Habeenka ee loogu talagalay buffs sheeko cabsi leh. Ciyaartu waxay ku salaysan tahay sheeko taxane ah "Naxdin". Ku dhex mar dhammaan cutubyada, oo ay ka buuxaan dhacdooyin iyo jilayaal midab leh. Dhammaan daanyeerka iyo kuwa ka soo horjeeda in la wajaho waxaa gacanta ku haya sirdoonka macmal. Laakin kuguma dhici doono, geesi. Waxaa xusid mudan qaabka ugu wanaagsan ee…
Dilkii New York Download PC Game free
Ka shaqee goob dembi oo muuji siraha! Dilkii New York Soo daji PC Game Dil bilaash ah oo ka dhacay New York Soodejin bilaash ah - Ciyaaraha PC-ga Dhammeystir baaritaanka! Qabo dembiilaha ciyaartan shayga qarsoon ee madadaalada iyo qabatinka leh! Ku biir dambi baadhayaasha Turino iyo Lamont kuwaas oo hadda loo wareejiyay Waaxda Baadhista Gaarka ah!…
Grim Soul: Badbaadinta Dhacdooyinka Muuqda
Grim Soul: Badbaadinta khiyaaliga mugdiga ah waa ciyaar ciyaartoy badan oo aad u baahan tahay inaad ku shubto dabeecadaada oo aad sahamiso adduun furan oo ay ka buuxaan daanyeerka, madaxda, iyo ciyaartoyga cadaawadda leh. Goobaha, walxaha, iyo makhluuqa ayaa lagu sameeyay qaabka khiyaaliga madow. Grim Soul: Badbaadinta khiyaaliga mugdiga ah ee Android waxay kuu oggolaaneysaa inaad barato xirfado oo aad dhisato…
Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah ee PC (2020) - Nuqul buuxa
Ku dhufo, la dagaallama, oo ka gura dariiqaaga sirta ah ee Qofka Yar ee Reaper sida Ollie, kaaliyaha yar ee Grim Reaper ee goobtan tacaburrada midabka leh ee Little Reaper. Ollie waxa uu sii ahaa masuulka Guriga Dhimashada, halka Grim uu qaatay fasax aad u qalma. Taariikhda la sii daayo: Luulyo 20, 2020 Nooca: Arcade, Platformer, Adventure, Indie Developer: Daabacaha Ciyaaraha Yaryar:…
Succubus: Ciyaarta ayaa ugu dambeyntii lagu dhawaaqay. Waxaan sugayaa 2021/2022!
Games NewBy Margaret Caffrey February 9, 2022 Leave a comment
Succubus waa ciyaar argagax leh oo ah jileeyaha badbaadada dhabta ah. Waa inaad u ciyaartaa sidii halyey shaydaan oo qurux badan, oo loo yaqaan suugaanta sida succubus. Waxaad geli doontaa adduun khiyaali dhab ah oo cadaabta ah, halkaas oo, si kasta oo la yaab leh, ay jiraan kuwa aan ku qanacsanayn sida ay wax yihiin. Taariikhda lagu sii daynayo:…
Deck of Ashes (2020) PC Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooc Buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey February 3, 2022 Leave a comment
Deck of Ashes waa ciyaar tacabur leh oo leh dagaal kaadh xeeladaysan. Midba midka kale, hoggaami koox geesiyaal-diid ah oo ku sii socda waddada madaxfurashada. Sahami adduun khiyaali ah oo murugo leh oo ururi kaararka sagxad dagaal oo gaar ah. Tijaabi kartidaada aad ku noolaan karto oo aad ku maareyn karto kheyraadka adigoo horumarinaya xerada xulafada. Dambaska dusha sare ka soo degay Taariikhda Siideynta: Juun 9,…
Electro Ride: Ciyaarta Racing Neon ee Bilaashka ah - Nooca Buuxa
Electro Ride: Racing Neon - tartanka baabuurta neon-ka ee ka yimid Bloc hore. Midda kale ee Yurub, oo ay kooxdii Barigu aanay ku dhicin, balse isu beddeshay xarun hanti weligeed ah iyo horuumar, waa halka ay caanka ku tahay. Electro Ride Soodejinta Taariikhda Siideynta: Luulyo 10, 2020 Nooca: Platform Racing: PC Interface Language: English, Multi8 Description:…
HAL QAYB: WARRIORS BURCAD 4
Hal Piece Pirate Warriors. Daabacaha Tecmo: BANDAI NAMCO Madadaalada Platform: Luqadda Interface-ka ee PC: Ingiriis, Multi4 Luuqadda Codka: Sharaxaada Jabbaan: The…
Daabacaadda Sims 4 dhijitaalka ah ee Deluxe ee bilaashka ah - Nooca buuxa
Qof kastaa wuu ogyahay ciyaartan. Dunida oo dhami waxay sugaysay sii deynta nooca la cusboonaysiiyay ee jilitaanka halyeeyga ah. Haddana maalintii ayaa timid. Daabacaadda Dijital ah ee Sims 4 Deluxe ayaa hadda diyaar u ah ciyaartoy kasta oo raba in ay dhisaan noloshooda ku habboon xaqiiqada dhabta ah. Horumariyayaashu waxay awoodeen inay u sameeyaan sida…
Dhaxalka Waara: Jade Cipher
Dhaxalka Immortal Legacy: Jade Cipher waa isku dhafka argagaxa iyo badbaadada, ciyaar ficil tacabur leh oo leh aragtida qofka koowaad, iyo filim ficil ah. Halkan waxa aad ka heli doontaa dhex galka aduunka halyeyga Shiinaha iyo khuraafaadka, tacaburka, iyo wax badan oo kale… Soodejintii Dhaxalka Immortal Taariikhda Siideynta: Meey 21, 2020 Nooca: Falka, Daabacaha Qofka 1aad: Viva Games Platform:…
Jewel Match Solitaire 2. Daabcaadda Ururiyaha
Jewel Match Solitaire 2 - qaybta labaad ee ciyaarta kaadhka sixitaanka ayaa markale kugu qaadi doonta safar cajiib ah oo aad ku dhex marayso boqortooyadii qarniyadii dhexe oo leh qalcado qurux badan. Sahami noocyo badan oo solitaire caadiga ah, adoo kaga gudbaya caqabadaha adag kaadhadhka la qaboojiyey iyo kuwa la xannibay, isticmaal gunooyin cajiib ah in ka badan saddex boqol oo heerar oo leh…
Ciyaarta soo dejinta bilaashka ah ee ATOM RPG Trudograd - Nooc buuxa
ATOM RPG Trudograd (ATOM RPG Trudograd) waa istaraatiijiyad door-ciyaar ku salaysan oo ay tahay inaad u tagto adduunka ay burburisay masiibo nukliyeer ah oo aad isku daydo inaad badbaadiso habeenka apocalypse cusub… Taariikhda Siideynta: Gelitaanka Hore ee May 11, 2020 Nooca: RPG, Horumarinta Badbaadada: AtomTeam Publisher: AtomTeam Platform: Nooca Daabacaadda PC: Nooca shatiga:…
Deep Rock Galactic – Shooterkii ugu horreeyay ee sci-fi oo leh aragtida qofka koowaad ee ciyaarta wadajirka ah kaas oo aad ka heli doonto gnomes meel bannaan, jawi gebi ahaanba la baabi'in karo, nidaamyada godka habraaca leh, iyo hirarka aan dhammaadka lahayn ee daanyeerka shisheeye. Qeybaha: 2020 Ciyaaraha / Toogayaasha / Ficil / Qofka Koowaad / Adduunka Furan / Taariikhda Siideynta Badbaadada: Meey 13, 2020…
BULLETSTORM Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooc Buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 31, 2022 Leave a comment
Ma doonaysaa in aad ku ciyaarto toogte arxan daran oo ay weheliso khayaali iyo ficil? Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay oo kaliya Bulletstorm soo dejin bilaash ah mareegahayaga! Sannadka Siideynta: 2017 Nooca: 3D / 2017 / Qofka 1aad / Shooter / Horumariyaha Ficil: Dadku waxay ku duuli karaan Luqadda: ENG Luuqadda Codka: ENG Tablet: PLAZA SYSTEM REQUIREMENTS Nidaamka hawlgalka: Windows 7/8 /…
Maalin ayaad soo laaban doontaa (2020) PC
Maalin maalmaha ka mid ah waad soo laaban doontaa waa baadigoob aad u adag oo ay ku jiraan ciyaar jilid, badbaado, iyo argagax, taas oo aad u tagi doonto Czech Republic doorka Daniel, aabaha gabadhiisa ka wayday… Taariikhda Siideynta : Maajo 5, 2020 Nooca: Adventure, Horror, Qofka 1aad ee Horumariya: software CBE Publisher: CBE software Platform:…
Ciyaarta Grail Wasaaqaysan oo Buuxda
Tainted Grail waa ciyaar-door-ciyaareed tacabur leh oo leh xeelado, cilmi-baaris, iyo adduun furan. Waxaad ka heli doontaa safar dheer oo khatar ah, adduun weyn, daraasiin NPC-yo ah, iyo wax ka badan… Ciwaanka: Taariikhda Siideynta Grail Wacan: 2020 Nooca: RPG, Soo-saare Adduunka Furan: Soo-saare Realms Digital Publisher: Toos Realms Digital Platform: PC Description: Ciyaarta…
WAR onkod Ciyaarta bilaashka ah ee la soo degsado - Version Full
Char D2 waa haan dhexdhexaad ah oo Faransiis ah oo dhex-dhexaad ah oo ay samaysay Renault si ka fudud oo ka jaban beddelka Char B1. WAR THUNDER Free Download ka dib markii ay burburtay dagaaladii ba'naa intii lagu jiray duulaankii Faransiiska 1940-kii, Char D2 oo ku hoos jira calanka Jamhuuriyadda Faransiiska ayaa ku dhex qarxi doona goobihii dagaalka ee dagaalka ee Thunder…
Qaadashada (2019) PC
TakeOver waa ciyaar dagaal sheeko-ku-saleysan oo caadi ah oo leh aragti dhinac ah, oo lagu sameeyay qaab dib-u-dhac ah oo lagu daray "garaac 'em up' Halkan waxa aad ka heli doontaa tiro aan la rumaysan karin oo dagaalo ah, qorshe aad u wanaagsan, iyo wax ka badan… Ciwaanka: Taariikhda Siidaynta Qaadashada: Noofambar 10, 2019 Nooca: Ficil, Dagaal, Horumariye: Pelikan13 Publisher: Pelikan13 Platform: PC…
CONAN EXILES Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooca Buuxa
Soo dejinta Conan Exiles waa ciyaar badbaado oo caalami ah oo furan oo ku saleysan buugaag ku saabsan Conan the Barbarian. Ku noolow adduunyo adag, dhis gurigaaga iyo boqortooyadaada, oo cadaawayaasha ku jejebiya dagaallo xamaasad leh. Sannadka Siideynta: 2018 Nooca: RPG / 3D / Horumariyaha Ficil: Funcom Luqadda: Ingiriis | Shuruudaha NIDAAMKA BADAN Nidaamka hawlgalka: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10…
Waayeelka Wareegtada V: Skyrim - Daabacaadda Gaarka ah
Daabacaadda Gaarka ah ee Elder V: Skyrim Special Edition waa dib-u-sii-deyn la wanaajiyey oo la ballaariyey ee asalka ah Buugaagtii Waayeelka V: Skyrim, kaas oo lagu daray cadawga cusub, qalabka, goobaha, jilayaasha, iyo dhammaan DLC-yada. Intaa waxaa dheer, Daabacaadda Legendary ayaa dib loo habeeyay garaafyada, lagu daray saameyn cusub iyo jawi faahfaahsan oo kordhay. Taariikhda Siideynta: Oktoobar 28, 2016 Nooca:…
GTA 4 Soodejin Aad U Adag Oo Loogu Talagalay Daabcadi Dhameystiran ee PC
GTA 4 si heer sare ah loo soo dejiyo oo loogu talagalay pc waxay furaysaa caalamka HD. Taxanahan ayaa tusaale cad u ah in horumarku aanu istaagin. Qorayaashu waxay muujinayaan horumar adag. Mid ka mid ah aasaaska dhammaan qaybaha waa midabaynta dambiilaha ee wax kasta oo dhaca. Ciyaartoyga waa inuu xado baabuur, dilo,...
Ciyaaraha la dagaallamayo
Jump Force – BANDAI NAMCO Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah nooca buuxa
Ciyaaraha la dagaallamayoBy Margaret Caffrey January 24, 2022 Leave a comment
Soo dejinta bilaashka ah ee JUMP waa ciyaar dagaal oo ay ku soo urureen geesiyaasha caanka ah ee anime iyo manga ee caalam kala duwan: Dragon Ball Z, Hal Piece, Naruto, iyo kuwa kale. Waxay isu geeyeen xoog si ay dhulka uga badbaadiyaan khatar ku soo fool leh. Ciwaanka: JUMP FORCE Taariikhda Siideynta: Feebarwari 15, 2019 Nooca: Action, Fighting, 3D horumariye: Spike Chunsoft Co., Ltd. Daabacaha:…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee EVERSPACE – Nooc Buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 24, 2022 Leave a comment
Everspace waa hal-ciyaaryahan meel toogtay. Waxyaalaha roguelike waxa lagu daraa garaafyo casri ah iyo sheeko soo jiidasho leh. Waxaad gali doontaa safar khatar ah adigoo dhex maraya koonka isbedeli kara, midab leh, oo ay ka buuxaan yaabab. Taariikhda Siideynta: Meey 26, 2017 Nooca: Action, Simulation, Roguelike Developer: ROCKFISH Games Platform: PC Publication Type: Interface Language: English, and Multi12…
Dragon Ball Z: Kakarot waa isku-dar ah ciyaar-jilid-jibbaaran iyo dildilaac, ciyaar ficil ah oo ay tahay inaad aado caalamka Dragon Ball oo aad ku noolaato nolosha Son Goku, nin leh awoodo ka sarreeya… Dragon Ball Z Kakarot Sidee Si aad u hesho Dragon Pearls gudaha Dragon Ball Z Kakarot, waxaad ka heli kartaa 7…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee Harada Emerald – Nooc Buuxa
Harada Emerald waa xero caruureed oo ku taal harada agteeda. Kaamkan ayaa ah mid muddo dheer laga dayrinayay arrimo la yaab leh oo muddo dheer ka hor dhacay awgeed. Ma jiro war sax ah oo ku saabsan sababta xerada loo xiray oo looga tagay. Jilaagii ugu weynaa, Michael, wuxuu aaday xeradan si uu u helo walaalkiis Peter, kaasoo…
Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah ee Zomboid Mashruuca – Nooc Buuxa
Mashruuca Zomboid (Mashruuca Zomboid) wuxuu u heellan yahay badbaadada ay ku hareereysan yihiin zombies xun. Waxaad wakhtigaaga firaaqada u lumin kartaa hawshan cajiibka ah. Kalidaa ama, iyadoo la kaashanayo ciyaartoy badan, la saaxiib asxaabta. Khariidad ballaaran ayaa waxaa ka buuxa fursado kala duwan oo lagu dilo waqtiga, lagu buuxiyo saadka cuntada, lagulana dagaallamo kuwa dhintay ee karaahiyada ah.…
Ciidanka Zombie 4: Dagaalkii Dhimatay - Super Deluxe Edition (2020) PC
Ciidanka Zombie 4: Dagaalkii Dhimatay Ciyaar bilaash ah oo soo dejisan oo dhammaystiran wuxuu siinayaa ciyaartoyga dhiiga ugu badan iyo dagaallo hal abuur leh oo leh zombies Nazi badan. Haddii aan ka hadalno saxnaanta taariikhiga ah, ka dibna horumariyayaashu waxay bixiyeen ugu yaraan dareenka xilligan, iyagoo diiradda saaraya qaybta dambe ee apocalyptic ee ciyaarta. Qaybtani sidoo kale waxay leedahay qaab wadajir ah - ilaa 4…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee Caliber – Nooc Buuxa
Caliber soo dejintu waa toogte qof saddexaad oo badan kaas oo toogashada, hawlo halis ah, hawlgallada ka hortagga argagixisada, badweynta hubka, iyo xaqiiqo aan hore loo arag ay ku sugayaan… Si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana uu ku dhex jiro iska horimaad dhexmaray ciidamada gaarka ah, kuwaas oo doorkooda ay ka ciyaarayaan…
Dark Light Ciyaar soo dejin bilaash ah - Nooc buuxa
Dark Light waa madal falanqeyn sci-fi ka buuxa oo leh ciyaar gaar ah. Waa inaad ku socotaa safar halis ah adoo maraya adduunka apocalyptic ee cyberpunk, oo ay ku nool yihiin kuwa ka sarreeya. Soodejinta Iftiinka Madow Taariikhda Siideynta: Gelitaanka Hore ee May 8, 2020 Nooca: Action, Adventure, Platformer, 2D Developer: Mirari & Co. Platform: PC Nooca Daabacaada: Hore ee Luqadda Interface:…
Nimbatus - Dhismaha Diyaaradda Duulista Hawada
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 21, 2022 Leave a comment
Ciyaartan, waxaad tahay kabtanka Nimbatus, warshadda ugu wayn ee drones-ka mobilada ee taariikhda. Dhis diyaaradahaaga aan duuliyaha lahayn oo sahamin caalamka, halkaas oo dhammaan sharciyada fiisigiska lagu dabaqo. Nimbatus soo dejisasho bilaash ah: Si aad u noolaato, waa inaad ka gudubtaa meerayaasha gebi ahaanba burburi kara ee biomes kala duwan. La hel xorriyadda hal-abuurka dhammaystiran iyo…
Blackthorn Arena ciyaarta free on PC Review
Blackthorn Arena waa jileeyaha milkiilaha garoonka gladiatorial, ciyaar aad ku noqon karto milkiilaha dhabta ah ee garoonka iskuna day inaad diyaariso gladiators kuwaas oo ku dagaalami doona adduunka oo ku ammaani doona adiga iyo goobtaada… Ciyaarta soo dejinta bilaashka ah ayaa dhacaysa dhulka dhulalka xorta ah ee khayaaliga ah.…
Minecraft Dungeons Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooc Buuxa
Minecraft: Dungeons waa hal-abuur dhammaystiran oo Mojang ah, kaas oo nuugay dhammaan taariikhda abuurista nooca godka ee ciyaaraha door-ciyaarista kombuyuutarka. Wax cusub ayaa diyaar u ah in lagu ciyaaro kombayutarada gaarka ah, Nintendo Switch, PS4, Xbox One iyo Game Pass. Taariikhda la sii daayo: Meey 26, 2020 Nooca: Action, RPG, Adventure Developer: Mojang Studios Platform: PC…
Cadhada Oo Soo Dajin Bilaash Ah Ciyaar Buuxa
Tani waa ciyaar degdeg ah oo ay tahay inaad ku ordo oo aad toogto dhammaan jihooyinka. Heerarka habraaca loo soo saaray iyo waxyaabo badan oo aan kala sooc lahayn kuma oggolaan doonaan inaad caajisto! Oo waxaas oo dhan leh garaafyo 2D casri ah oo qurux badan oo qaraar sare leh. Cadho la soo degey. Taariikhda Siideynta: Meey 8, 2020 Nooca: Action, Shoot'em up, Platformer Developer: Awesome Games...
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad daawato fiidiyowga hadhow, laakiin ma jiri doono gelitaanka internetka. Waxaa laga yaabaa in berri ama saacad gudaheed muuqaalku la tirtiri doono hal sabab ama mid kale. Waxaan ku tusi doonaa sida loogu soo dejiyo fiidiyowyada YouTube bilaashka ah ee casrigaaga, tablet-kaaga iyo kumbuyuutarka. Habka ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan ee lagu soo dejisan karo fiidiyowyada YouTube-ka si…
Soulcalibur VI waa sii wadida ciyaaraha dagaal ee taxana ah oo ay dagaalyahanadu si buuxda u isticmaalaan hubka. Dhexdeeda, dagaalyahannada ugu fiican ayaa mar kale qaadaya iska horimaad taariikhi ah oo lagu haysto seefta halyeeyga ah. Dhacdooyinku waxay horumaraan qarnigii lix iyo tobnaad, iyagoo ku laabanaya xilliga ciyaarta asalka ah waxayna muujinayaan tafaasiil cusub oo ku saabsan wixii ku dhacay…
Sniper Elite V2 dib loo maamulay (2019)
Sniper Elite V2 Maalmihii mugdiga ahaa ee dhamaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo ka mid ahaa burburkii Berlin, hal xabbadood ayaa beddeli karta taariikhda… Toogashada caanka ah Karl Fairburn ayaa ku soo laabtay safka hore ee nooca la cusboonaysiiyay ee ciyaartan caanka ah oo leh hawlgallo sir ah. Gudaha Sniper Elite V2Waxaad ku tahay toogte Mareykan ah oo caan ah, Carl Fairburn,…
Ciyaaraha ugu fiican ee lagu dagaalamo PC - soo dejiso noocyo buuxa
Ciyaaraha la dagaallamayoBy Margaret Caffrey January 21, 2022 Leave a comment
Waxaa ka mid ah noocyada badan ee kala duwan ee ciyaaraha khadka tooska ah, ciyaaraha ugu fiican ee la dagaalanka PC waa kuwa ugu yar. In kasta oo noocani uu dhab ahaantii leeyahay kuwa jecel, xilligan mashaariicda noqon lahaa ciyaaraha "saaxiibka" ee ciyaaraha online-ka ah ayaa lagu tirin karaa faraha. Lacag badan ayaa ku jirta PC. Waxaad waydiinaysaa sida tani ula xidhiidho…
FIFA 11 (2010) Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Version Full
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 17, 2022 Leave a comment
Nidaamka hal-abuurka leh ee qulqulka jiho kasta ayaa bixiya xakamaynta buuxda ee ciyaarta. Farsamaynta animation-ka soo socdaa waxay u ogolaataa ciyaartoyga farsamada inay ka fogaadaan difaacyadii hore iyagoo si fiican iskutallaab u samaynaya. Qaabka fiisigiska ciyaarta waxa uu isticmaalaa nidaam xisaabinta isku dhaca cusub, kaas oo ka caawinaya in uu sameeyo halgan aad u kala duwan, xiiso badan, oo aan la saadaalin karin kubada. Iyadoo Be…
Ciyaarta Soo Dejinta Stoneshard ee Bilaashka ah - Nooc buuxa
Soo dejinta Stoneshard waa boorso leh bamgareynta bilaashka ah iyo adduun furan oo aad ku sugeyso dagaallo ay la galaan daanyeero kala duwan, ugaarsi qaali ah, daraasiin hawlo xiiso leh, iyo in ka badan… Taariikhda Siideynta: Gelitaanka Hore ee Febraayo 6, 2020 Nooca: RPG, Soo-saare Roguelike : Khadka Ciyaaraha Daabacaha: HypeTrain Digital Platform: PC, PlayStation 4 Nooca Daabacaadda: Gelitaanka Hore…
Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah ee Temtem – Nooc Buuxa
Ugu dambeyntii, horumariyayaashu waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan ciyaaraha kuwaas oo diiradda saaraya kaliya gameplay laakiin sidoo kale qaybta bulshada. Maanta waxaad heli doontaa fursad aad ku soo dejiso Temtem oo aad u gasho tacabur xiiso leh dhammaan jasiiradaha sabbaynaya jasiiradaha. Soo Dejinta Xorta ah ee Temtem Dhulkan waa in aan la dhayalsan maadaama ay…
Ugaadhsiga: Goobaha ugaarsiga Soo dejin bilaash ah - Nooc buuxa
Ugaadhsiga: Goobaha ugaarsiga waa toogasho ciyaartoy badan oo asymmetrical ah oo ka dhacda meel kayn fog ah halkaas oo uu Predator-ku baacsado ugaarsiga ugu khatarta badan. U ciyaar sidii qayb ka mid ah koox sare oo afar qof ah oo dhammaystir hawlgallada dagaalka markaad ka dhuumanayso Predator. Ama qaado doorka Predator oo ugaarso kuwa ugu mudan…
Dark Souls 3: Daabacaadda Deluxe ee Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooc Buuxa
Ciyaarta Dark Souls 3 waxay ka kooban tahay adduun weyn oo furan. Dabeecadda ugu weyn waxay ku wareegaysaa adduunka lumay oo la dagaallama jinniyada sharka leh iyagoo isku dayaya inay fahmaan inkaartiisa oo raadinaya waddo ka baxsan adduunyadan mugdiga ah. Waad u ciyaari kartaa isaga, waxaad awoodaa inaad garaacdo xirfadaha, waxaad haysataa seefo iyo sixir. Taariikhda Siideynta: Abriil…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee Kenshi – Nooc Buuxa
Kenshi, ciyaar door-ciyaareed sandbox ah oo gogol-xaareed halkaas oo aad ka samaysanayso sheekadaada. Dadku had iyo jeer waxay yidhaahdaan geesinimadu way adag tahay, laakiin qofna ma odhanayo way ka sii adag tahay qofka caadiga ah ee go'aansada inuu sameeyo waxa saxda ah. Kenshi taariikhda siideynta bilaashka ah: Diseembar 6, 2018 Nooca: RPG, Simulator, Strategy, Sandbox, Furan…
DreadOut 2 Ciyaarta Soo Dejinta Bilaashka ah - Nooca Buuxa
DreadOut 2 soo dejin bilaash ah waa sii wadida qaybta koowaad ee naxdinta adag ee leh aragtida qof saddexaad. Markan waa inaad u noolaataa sidii gabadh lagu magacaabo Linda oo ku sugan magaalada baaxadda weyn, la dagaallantay bahalnimada, ka cararka khatarta, oo aad wax badan ka qaban doonta
XUSKA SADDEXDA BOQORTOOYADA XIV (2020) PC
Jaceylka Saddexda Boqortooyo ee XIV waa sii wadida istaraatiijiyado isdaba joog ah oo ku saleysan goobta Shiinaha. U dagaallama Shiinaha iyo dhammaan dhulalkeeda oo u kala qaybsan kooxo, guulo gaadh, oo dib u qor masiirka Boqortooyada Shiinaha… Nooca: Istaraatiijiyadda, Horumarinta TBS: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Platform: PC Interface Language: English, Multi5 Description: Dabiici ah,…
Ciyaarta Soodejinta Xorta ah ee Carnival Battle - Nooc Buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 14, 2022 Leave a comment
Battle Carnival waa toogasho darawalnimo khadka tooska ah kaas oo jebiya dhammaan fikradaha la aasaasay. La dagaallama cadawga dacas, makarafoon, ama isticmaal faash baraf afaysan! Ma jiraan sharciyo iyo xannibaadyo - qabso qoriga ugu weyn oo jebi furimaha hilibka ee dhiigga leh. Dagaal Carnival Soo Dajinta Sannadka Siideynta: 2016 Nooca: Action, MMOFPS, Shooter, Platform Online: PC Sharaxaada: Toogashada casriga casriga ah…
Huntdown (2020) Ciyaarta soo dejinta bilaashka ah - Nooc buuxa
Ugaarsiga bilaashka ah: In lacag laga sameeyo dembiyada waa adag tahay ... Ilaa, dabcan,, inaad tahay ugaarsade deeqsi ah. Mustaqbalku waa deyrka. Waddooyinka waxaa hareeyay rabshado, kooxo dambiilayaal ah ayaa xukuma magaalada, booliiskana ma awoodo, waxaana kaliya ee ugaadhsadayaasha abaal-marinaha ah ay magaalada ka badbaadin karaan gacan-ku-haynta dambiyada. Noqo…
Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee Hades – Nooc Buuxa
Hades waa boorso ka timid hal-abuurayaashii Bastion iyo Transistor, kuwaas oo dhacdooyinkoodu ay ka dhacaan adduun ku salaysan khuraafaadka Giriigga, halkaas oo ay tahay inaad la dagaallanto ilaaha dhimashada. Hades Soo Dajinta Ciyaarta Taariikhda Siideynta: Gelitaanka Hore ee Diseembar 10, 2019 Nooca: Falka, Sharaxaadda Dabeeciga ah: Tuduc kasta oo cusub lama mid noqon doono sidii hore.…
Yakuza: Sida Dragon Role-Playing Adventure Game Version Full
Yakuza: Sida masduulaagii - maskaxdii shirkadda SEGA, ciyaarta tamashlaha doorka-ciyaar, ficil leh dagaallo ku salaysan xiiso leh. Dabeecadda ugu weyn ee ciyaarta waa Yakuza hoose - Ichiban Kasuge. Kadib markii uu 18 sano ku qaatay xabsiga dambiga uusan waligiis gelin, Kasuge wuu xoroobay wuxuuna ogaaday in qof kasta oo aad loo jeclaa…
Ruuxa Woqooyi Free Download Full – Version
Soo dejinta Ruuxa Waqooyiga waa sheeko sheeko indie-qof saddexaad oo kali ah kaas oo aad ka heli doonto safar midab leh oo aad loogu raaxaysanayo oo ay ka buuxaan tacabur, xujooyin, hal-xidhaale, iyo in ka badan… Taariikhda Siideynta: Meey 7, 2020 Nooca: Adventure, Indie Developer: Infuse Studio Publisher: Isku-darka Ciyaaraha Platform: PC, PlayStation 4 Nooca Daabacaadda: Luuqadda Interface-ka shatiga: Ingiriisi, Multi10…
Dagaalkan Mine free soo dajin PC Game Full Version
Dagaalkan bilaashka ah ee bilaashka ah - ciyaar ku saabsan mawduuc milatari, halkaas oo aadan qiyaasin doorka askari geesi ah oo badbaadinaya adduunka, halkan waxaad qaadan doontaa dhinaca degane fudud. Magaaladii waa la go'doomiyay oo mugdi iyo fowdo ayaa hareeraha ka taliya. Hadafka kaliya ee aad leedahay waa inaad ku noolaato adigoo isticmaalaya hab kasta.…
Badbaadiye: Ciyaarta Soo Dejinta Xorta ah ee Cadaadiska aan la arki karin - Nooc buuxa
Badbaadiyaha: Cadaadiska aan la arki karin waa jileeyaha badbaadada ee aad u qabow kaas oo aad ku aado balasaadka aduunka ee fowdada ka dib burburkii ilbaxnimada iyo soo bixitaanka zombies… Badbaadiyaha bilaashka ah Soodejinta Taariikhda , Istaraatiijiyada, Horumarinta Badbaadada: Bob Platform: PC Interface Language: English Voice Language: None...
Caddaalad-darrada 2: Daabacaadda Halyeyga
Cadaalad darada 2 waa sii socoshada ciyaarta dagaalka Dulmiga: Gods dhexdeena oo waxay siisaa ciyaartoy si ay uga qaybqaataan dagaalada udhaxeeya jilayaasha caanka ah ee DC. Nidaamka qalabka gaarka ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad habayso mid kasta oo ka mid ah Super Heroes iyo Super Villains, taasoo ka dhigaysa mid gaar ah. Isticmaaluhu wuxuu bedeli karaa muuqaalka, qaabka dagaalka, wuxuuna samayn karaa go'aamo ku saabsan…
Dagaalkii Adduunka Z – Goty Edition Full Version
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 11, 2022 Leave a comment
Shirkadda Saber Interactive, oo ay weheliso istuudiyaha Paramount Pictures, waxay go'aansadeen inay ka farxiyaan taageerayaasha dagaalka firfircoon ee zombies-ka. Markan waxay soo saareen ciyaar la yiraahdo Dagaalkii Adduunka Z, kaas oo bixiya inuu aado adduunka zombie oo isku dayo inuu ku noolaado xaqiiqooyinka adag ee iska horimaadka. Waxaad hadda soo dejisan kartaa Dagaalkii Adduunka Z,…
Disney Animation ayaa soo saartay goos gooski ugu horeeyay ee filimka soo socda ee animated ee Raya and the Last Dragon. Aragtida horudhacku waxay soo bandhigaysaa aragtida koowaad ee tacaburka cusub ee firfircoon, kaas oo, ka duwan filimada sida Pixar's Soul, weli loo qorsheeyay sii deynta masraxa. Movierulz Raya iyo The Last Dragon ayaa hadda lagu wadaa in la daawado shineemooyinka Maarso 11, 2021.…
SnowRunner: Ciyaar MudRunner ah oo buuxa
Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 10, 2022 Leave a comment
SnowRunner waa jile cusub oo firfircoon oo macquul ah oo ka socda Focus Home Interactive, kaas oo ah sii wadida Spintires-ka caanka ah: MudRunner. Ciyaartoyda waa inay galaan xaqiiqda ah xirfad aad u khatar badan oo aad u daran - darawalka baabuurta waaweyn. Soo dejinta SnowRunner Taariikhda Siideynta: Abriil 28, 2020 Nooca: Jilidda, Racing, Soo-saare 3D: Saber Interactive Platform:…
Games NewCiyaaraha PC
Da'da Boqortooyada Daabacaad qeexan: Soo dejin bilaash ah oo buuxa
Games New, Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 10, 2022 Leave a comment
Sharaxaada Ciyaarta: Waxaan kuu soo bandhigeynaa istiraatiijiyadda caadiga ah ee ciyaarta Age of Empires Definitive Edition si bilaash ah u soo dejiso nuqul buuxa oo daabacaadda cusub. Waxaa loo sameeyay si loogu sharfo taxane ah oo u dabaaldegaya 20 sano. Ciyaartaani waa dib u habeyn dhab ah oo lagu sameeyay istiraatijiyadda kumbuyuutarka, taas oo qabsatay quluubta iyo maskaxda ciyaartoy badan…
Valorant waa toogte taatikada ciyaarta tartan bilaash ah oo ka socota Ciyaaraha Riot
Games New, Ciyaaraha PCBy Margaret Caffrey January 9, 2022 Leave a comment
Valorant waa ciyaar taatikada 5 ilaa 5 oo bilaash ah oo ka socota Ciyaaraha Riot (League of Legends) ee PC. Siideynta Ciyaaraha Valorant Riot waxaa loo qorsheeyay 2020, horumariyayaashuna waxay ballanqaadayaan adeegayaal bilaash ah oo leh qiime sax ah 128 dhammaan ciyaartoyda iyo ugu yaraan 30 FPS xitaa kombuyuutarrada da'da ah. Ciyaaraha Rabshadaha ayaa sidoo kale ballan qaadaya…
Ciyaaraha PC, Reviews, top GamesBy Margaret Caffrey January 9, 2022 Leave a comment
Noqo mid aad caan u ah mahadsanid guulihii waaweynaa ee Fortnite iyo PlayerUnknown BattleGround (PUBG), nooca Battle Royale wuxuu noqday mid looga baahan yahay ciyaartoyda, laakiin sidoo kale daabacayaasha ciyaarta fiidiyowga. Ciyaarta ciyaaraha Apex Legends Game Play, Farshaxanka Elektarooniga ah wuxuu soo bandhigaa toogashadooda Battle Royale oo leh Respawn Entertainment. Ciyaarta fiidiyaha ee Apex Legends waxay ku dhawaaqday inay tiriso 25 milyan…
Yaab! Frozen 2 wuxuu saaran yahay Disney Plus hadda: ku daadi filimka khadka tooska ah meel kasta
Muddo lix sano ah, kahor imaatinka dib-u-samaynta CGI ee The Lion King, Disney Frozen waxay haysay safka koowaad ee darajada filimada xaraashka ah ee ugu sareysa. Waa yaab in Disney aad u fikirtay ka hor intaysan bilaabin shaqada taxanaha. Shaki la'aan, Frozen 2 cusub ayaa saaran Disney Plus hadda wuxuu ku soo ururin doonaa goobta…
3MOVIERULZ 2020 - Mareeg si sharci darro ah u daabac xiriiriyeyaasha
Sida aan wada ognahay, marka soo saaraha uu malaayiin ku maalgeliyo samaynta filimkiisa blockbuster, waxa hubaal ah inuu leeyahay rajooyin guul weyn leh oo faa'iidada ugu badan ay keentay natiijada. Wax walbana waxay ku xiran yihiin marka filimkan tiyaatarada la saarayo iyo dad aad u tiro badan oo daawadayaal ah ayaa u soo daawasho taga. Laakiin waxaa…